पुट्ट पेट निस्किएको छ, कसरी घटाउने ? « Nagarik Khabar
पुट्ट पेट निस्किएको छ, कसरी घटाउने ?
प्रकाशित मिति : 11 March, 2022 4:34 pm
काठमाडौं । पुट्ट पेट निस्किनु धेरैको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । यस्तो पेटले शरीर भद्दा र असुहाउँदिलो देखिन्छ । लुगा लगाउँदा पनि पेट लुकाउनै सास्ती हुन्छ ।कोहि जिम धाइरहेका छन्, कोहि दौडिरहेका छन् । यद्यपी खानपान र शारीरिक क्रियाबीच सन्तुलन नमिल्दा पेट बढेको बढ्यै छ ।